शारदा–तिलचन्द्र पुरस्कार पत्रकार सुवेदीलाई - Nepal News - Latest News from Nepal
शारदा–तिलचन्द्र पुरस्कार पत्रकार सुवेदीलाई
चितवन, २२ माघ । प्रेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाले यसैवर्ष स्थापना गरेको शारदा–तिलचन्द्र पत्रकारिता पुरस्कारबाट शाखाका संस्थापक अध्यक्ष रामबाबु सुवेदी पुरस्कृत हुनुभएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपालको १८ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज नारायणगढमा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह एवम् ‘चितवनको विकासमा मिडियाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो पुरस्कार सुवेदीलाई प्रदान गरिएको हो ।
नेकपा (एमाले) चितवनका अध्यक्ष जगन्नाथ थपलियाले रु दश हजार नगद रहेको सो पुरस्कार सुवेदीलाई प्रदान गर्नुभएको हो । भरतपुर उपमहानगरपालिका–१२ निवासी सुवेदी हाल सञ्चारपत्र दैनिकमा सह–सम्पादकका रुपमा कार्यरत हुुनुहुन्छ ।
विसं २०५३ मा कार्टुन विधाबाट पत्रकारिता सुरु गर्नुभएका सुवेदीले हिमालयटाइम्स, चितवनपोस्ट, पारदर्शी, वर्गीकृत दैनिक, छलफल साप्ताहिकलगायतमा काम गरिसक्नुभएको छ । आफू पुरस्कृत हुनपाउँदा पत्रकारिता माथिको सम्मान भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा नेकपा (एमाले) चितवनका अध्यक्ष थपलियाले यस्ता पुरस्कारले पत्रकारलाई पेसाप्रति थप मर्यादित बनाएर कार्य क्षेत्रमा उत्साह प्रदान गर्ने बताउनुभयो । उहाँले चितवनको विकासमा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
चौतारीका जिल्ला अध्यक्ष तीर्थ नेपालको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा सांसद कृष्णभक्त पोख्रेल, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष यमबहादुर परियार, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष बद्री तिमल्सिना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद प्रकाश सिंह, नेपाल प्रेस यूनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाका सभापति हरि पोख्रेल, पुरस्कार स्थापना गराउनुभएका व्यवसायी डा. तिलचन्द्र भट्टराई र डा. शारदा थपलियालगायतले पुरस्कार स्थापना हुनु महत्वपूर्ण भएको भन्दै जिल्लाको विकासमा मिडियाले पु¥याएको योगदानको चर्चा गर्नुभएको थियो ।
पोल्ट्री व्यवसायी भट्टराई र उहाँकी धर्मपत्नी प्राध्यापक डा. शारदा थपलियाले रु दुई लाख ५० हजारको अक्षयकोष जम्मा गरी पुरस्कार स्थापना गरिदिनु भएको हो । प्रेस चौतारीले कम्तीमा १२ वर्ष पत्रकारिता गरेका एकजना पत्रकारलाई हरेकवर्ष आफ्नो स्थापना दिवसका अवसरमा यो पुरस्कार प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
बाह्र किलो चरेससहित दुई पक्राउ